Red's Rose Dream: 2009
Peter Rabbit Calender
Miss Potter Movie and Peter Rabbit
First Time items
Posted by Red's Rose Dream at 01:17
ကျွန်မရဲ့ ရောဂါက ဓါတ်ပုံဆိုရင် မပြင်ဘဲ တင်ရတာကိုကြိုက်ပါတယ်။ ဒါလေးက ဖုန်းကင်မရာလေးနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးပါ။ အမှတ်တရအနေနဲ့ တင်လိုက်တာပါ။ ထူးထူးခြားခြားတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခေါင်းထဲမှာ ပေါ်လာတာလေး တစ်ခုက ကောင်ကင်ကြီးက မြက်ပင်တွေအတွက် တကယ့်ကိုဝေးပေမယ့် ဒီလို လေးကျတော့ နီးနီးလေးလိုပါဘဲ။ အမြင်လေးတစ်ခုကြောင့် အကွာအဝေးတွေကနေ နီးသွားသလို ဖြစ်သွား ပေမယ့် ကတယ်တော့လည်း ဝေးနေတုန်းပါဘဲလို့ ဆိုတဲ့ မတူတဲ့ အတွေးနှစ်ခု ခေါင်းထဲ ရောက်လာပါတယ်။
Labels: Photo, ဓါတ်ပုံ
Posted by Red's Rose Dream at 01:04
ဒါလေးများ အရေးတယူလုပ်ပြီးတင်တယ်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ဒါက ကျွန်မရဲ့ ပထမဆုံးချက်ဖူးတဲ့ ကြာဆံချက်။ အိမ်မှာက မေမေဘဲချက်တာ။ ကိုယ်က ဘေးကနေ ကူယုံတင်ကူတာဆိုတော့ နည်းတော့ သိပါတယ်။ အစဆုံး ကိုယ်မလုပ်ဖူးတော့ ဒါက ပထမဆုံး ကြာဆံချက်ပေါ့။ မဆိုးဘူး စားလို့ ကောင်းတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာချက်ပြီး ကျေနပ်နေတယ်။ စကားကောင်းလိမ့်မယ်လို့ မထင်ထားပေမယ့် စားကောင်းခဲ့တယ်။
ထူးခြားတာကတော့ ကြက်သားဆီသတ်တဲ့အချိန်မှာ ကြာဇံကို ထည့်ပြီး ဆီသတ်ခဲ့ပြီးတော့ ချက်တာ ကြာဇံသိပ်ပြီး မပွဘူး။ အဲ့ဒါလေး တစ်ခုပါဘဲ။ ပထမဆုံး ကြာဇံချက်ကတော့ အောင်မြင်သွားပါတယ်။ ကြာဇံချက်က ပစ္စည်းစုံပေမယ့် အဆာဗလာကတော့ မစုံဘူး။ ဒါပေမယ့် စားကောင်းတာဘဲ။ ကိုယ့်ဘာသာ ချက်ပြီး စားလို့ကောင်းပြီး ကျေနပ်တဲ့အထဲမှာလည်း ပါတာကြောင့် ဘလောဂ့်မှာတင်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Red's Rose Dream at 23:48
Finally, the day is come. I believe he will win this year. He try really hard to win in clay court. This is his first clay court title in his career. Now he got his 14 grand slam title in 2009. I still believe him to get more Grand slam title. When I saw he cry in Australian Open this year, I am really sorry for him. And I had cry for him. Thanks Roger for not give up his career. I believe you will win Wimbledon for this year. Go Go Roger.
Posted by Red's Rose Dream at 22:13
ကဲကဲ ကြည့်မနေနဲ့ အထဲဝင်ကြရအောင်
အ၀င်ဝက မြင်ကွင်းလေးက လှသားနော်..
ဘေးမှာကတော့ ဒီလို တံခါးပေါက်အမြင်ကြီးလိုမျိုးတွေကလည်း လှတာဘဲ..
ကဲကဲ အပေါ်စီးကနေ ကြည့်ရအောင် တက်လိုက်ဦး...
သူတို့လေးတွေလည်း ကြိုးစားပြီး တက်ကြရှာတယ်...
ဟော့ဟိုဘက်မှာက ကလေးတွေ ရေဆော့နေကြတယ်...
ဟဟဟ ဒီဘက်ကကြည့်တာ တော်တော်လှတာဘဲဟေ့..
ဒီဦးလေးကြီး တစ်ယောက်တည်း ငေးနေတယ်..
ဟာ ဒီဘက်မှာလည်း မြက်ခင်းကြီးကလည်း လှတာဘဲ...
ကြည့်ရတာ စွန်လွှတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာဖြစ်မယ်နော်..
ကဲကဲ ငေးမနေနဲ့တော့ ပြတိုက်ထဲဝင်ကြမယ်...
ဒါက ရေသန့်ဗူးတွေဘဲ မြင်ရအောင် မီးစုန်းသုတ်ထားတယ်. အိုင်ဒီယာလေး မိုက်တယ်ဟ..
သြော် စလုံးမှာလည်း ရေကြီးဖူးတာဘဲနော်..
ဟဟ ထမီတွေနဲ့ တဲတွေနဲ့ဟ..သော်မဆင်လမ်းမှာတဲ့..
သြော် အသံအကြောင်း သရုပ်ပြထားတာ အထဲမှာ စပီကာလေး ပါတယ်ဟ...
ဟာ ဒီဘက်က ကြည့်တော့လည်း လှတာဘဲ
ဒီနေ့ သွားခဲ့တဲ့ Marina Barrage ကို စာတွေ ရေးရင် အများကြီး ရေးရမှာမို့ ဒီလိုလေး တင်လိုက်ပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံကြီး ရေချိုလှောင်နိုင်အောင် ဘယ်လို ကြိုစားထားသလဲ။ ရေးကြီးတာတွေကို ဘယ်လို လုပ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ သိခွင့်ရခဲ့တော့ ၀မ်းသာပါတယ်။ လုပ်ပေးတဲ့လူကိုလည်း ပိုပြီး လေးစားမိတယ်။ ဒီတစ်ခုတည်း အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို တံငါရွာကို ဒီလိုဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တာကို လေးစားမိတာပါ။
Picture was take with Nokia 6500 classic.(ဖုန်းကြော်ငြာတာ ဟုတ်ဘူး။ ပုံတွေ သိပ်ပြီး မလှတာအားနာလို့ အကြောင်းပြတာ။)
Posted by Red's Rose Dream at 00:44
Posted by Red's Rose Dream at 00:34
Posted by Red's Rose Dream at 18:50
Gonna be OK like this one.
I makeawish to get back my strength again.
Wanna through the rain..........
Posted by Red's Rose Dream at 20:24
(I WOULD LIKE TO AGREE THIS ONE.)
(I'M NOT SURE ABOUT THIS ONE :p)
(I WISH THIS ONE COME TRUE. :P)
(I DON'T KNOW YET.)
I think most of results are right. I like to take that kind of test. Last Friday, I go to Suntec City Career Fair and I take similar test there. That's test give me some advice and tip for my career life. And they can talk about what is my dream after answering 60 question. If you interest try it. Here is internet personality test link.
Credit to Tommy.
Posted by Red's Rose Dream at 19:59
Peter Rabbit ရဲ့ ပြက္ခဒိန်လေးတွေပါ။ ချစ်ဖို့ကောင်းလို့ လင့်လေးတွေ တင်ပေးလိုက်တာ။
ဇန်န၀ါရီ ဖေဖေါ်ဝါရီ မတ်
ဧပြီ မေ ဇွန်
ဇူလိုင် သြဂုတ် စက်တင်ဘာ
အောက်တိုဘာ နိုင်ဝင်ဘာ ဒီဇင်ဘာ
Posted by Red's Rose Dream at 11:12
Actually I don't have good mode to write blog. But when I show picture from below I want to write somethings about Miss Potter Movie (another link for movie). It is true story base on 20th century and about author who write children story in that day. And still famous and best selling in these day. I had never read about that famous children story before but I have seen that character of Peter Rabbit in other place like book store or internet web site. It is cute and I like that character. Because it's seem look like me. :P Sometime I amalazy rabbit and I made lot andalot of problem all the time in my life. But ,I think, I enjoy being Rabbit. :D
ဒီဇင်ဘာအိမ်မှာရှိတုန်းက ရုပ်ရှင်တော်တော်များများကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ အနည်းဆုံး ၂ ကားလောက် ကြည့်ဖြစ်တယ်။ Miss Potter ကားကို ကျွန်မကြိုက်တဲ့ မင်းသမီးပါလို့ ဘာကားလဲ ကြည့်ရင်းက ကြည့်ဖြစ်သွား တာပါ။ အစကတော့ True Story မှန်းမသိဘူး။ နောက်ဆုံး စာတမ်းထိုးမှ True Story မှန်းသိတာ။ သူနဲ့ စပ်ပြီး ဒီ Peter Rabbit အကြောင်းကိုလိုက်ကြည့်မိတယ်။ တော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့ ဇာတ်ကောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ ယုန်လေးက သိပ်ပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ။ စာရေးဆရာကအမျိုးသမီးက သိပ်ပြီး နုညံ့တဲ့ အမျိုးသမီးလို့ မြင်မိပါတယ်။ သူ့ ဇာတ်ကောင်တွေက ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့တင် စိတ်နေစိတ်ထား နုညံ့သွားသလိုမျိုး ခံစားရပါတယ်။ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ကားလေးပါ။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်း True Story ရုပ်ရှင်တွေကို ပိုကြိုက်တာ များလို့လားမသိဘူး။ ဒီကားလေးကို သဘောကျမိတယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ Peter Rabbit ပုံလေးတွေကိုလိုက်စုနေတယ်။ :D
အင်္ဂလိပ်စာအရေးကျင့်နေပါသဖြင့် သည်းခံခွင့်လွတ်ကြပါကုန်။ :D
Posted by Red's Rose Dream at 20:04
ဒီလာမယ့် ၁၀ ရက်နေ့မှာကျရောက်မယ့်၊ ကျွန်မသတိရပေမယ့် ကျွန်မကို သတိမရမယ့် သူငယ်ချင်းရဲ့ ၂၇ နှစ်မြောက် မွေးနေ့အတွက်ပါ။
မုန့်လေးတွေက ချစ်စရာလေးတွေပါ။ Forward mail ကနေရလို့ တင်လိုက်တာပါ။ လင့်က ဒီမှာပါ။ ချစ်စရာလေး တွေနော်။ ဒါမျိုးလေးတွေဆို စားရက်စရာတောင်မရှိဘူး။ ဒါမျိုးမုန့်လေးတွေ တစ်နေ့တော့ လုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Labels: current, စပ်မိစပ်ရာ
အခုတလော အိန်ဂျယ်ရူးရူး နေတာ။ မနေ့က အဲ့ဒီအိန်ဂျယ်လေး နှစ်ခုဝယ်ဖြစ်တယ်။ ချစ်စရာလေး။ အမှန်က အိန်ဂျယ်အကြီးလေးက မနှစ်က ဒီဇင်ဘာကတည်းက ကြိုက်နေတာ။ အဲ့ဒီ အိန်ဂျယ်လေးကိုမြင်ပြီး ရူးသွားတာ။ချစ်စရာလေး ခရာမှတ်နေတာ။ ပြီးတော့ သူ့ခေါင်းပေါ်မှာ မီးခွက်ထွန်းတာလေးလဲပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း အိန်ဂျယ်လေးတွေစုမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်။ အိန်ဂျယ်လေးတွေက ဈေးတော့မသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် တခြား ဟာတွေလျှော့ပြီး ၀ယ်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်။
ကျွန်မရဲ့ ပထမဆုံးသောက်ဖူးတဲ့ Star Bucks က ကော်ဖီလေး အမှတ်တရရိုက်လာတာပါ။ သူများတွေအတွက် မထူးဆန်းပေးမယ့် နာမည်ကြီးတဲ့ ကော်ဖီကို ဒါပထမဆုံးသောက်ဖူးတာမို့ အမှတ်တရအနေနဲ့ပါ။ ခါတိုင်းဆို စားပြီးမှ သတိရတာများလို့။ ဒီတစ်ခါ မစားခင်ရိုက်ဖြစ်တာလဲအမှတ်တရပါဘဲ။
My First Star Bucks.
Posted by Red's Rose Dream at 16:43
အခုတလော လွမ်းစရာမရှိရှာကြံပြီးလွမ်းနေတယ်။ အမှန်တော့ စိတ်အလိုမကျတာတွေများနေတာပါ။ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာတွေကို အချိန်မှီမလုပ်မိတော့ ဖြစ်သင့်တာတွေလည်း အချိန်မှီမဖြစ်လာ တော့ဘူးပေါ့လို့ ပြောကြ မှာပါ။ လူတိုင်းမှာ ရွှေရောင်အချိန်ဆိုတာ ရှိခဲ့ကြတာပါပဲ အဲ့ဒီ့ ကျွန်မပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးတဲ့၊ ကျွန်မရဲ့ ရွှေရောင်အချိန် တွေကိုလွမ်းပါတယ်။ အရင်အချိန်တွကိုလွမ်ပါးတယ်။ လူတိုင်းလွမ်းခွင့်ရှိပါတယ်။ ကျွန်လည်း လွမ်းခွင့်ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အခု ကျွန်မရဲ့ရွှေရောင်အချိန်တွေကို ကျွန်မလွမ်းပါတယ်။ ကျွန်မမှားခဲ့ ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်တော့ ဒဏ်မခတ်သင့်ဘူးပေါ့နော်။ ဆုတောင်းပါတယ် နောက်ထပ်ရွှေရောင်နေ့ရက်တွေ ထပ်ပြီး ကြုံပါရစေလို့။ ကျွန်မဆုတောင်းတွေလည်း အချိန်မှီပြည့်ပါရစေလို့။
Posted by Red's Rose Dream at 10:07
အသားလုံးနဲ့အာလူးပြုတ် (ုဘယ်ရီသီးအချဉ်လေးနဲ့ စားတာ တော်တာ် စားကောင်းတယ်။)
ဘယ်ရီသီးအချဉ်ကို တစ်ခါမှမစားဖူးဘူး။ စစချင်း စားကောင်းမယ်မထင်မိဘူး။ ဒါပေမယ့် တော်တော် စားကောင်းတယ်။
မနေ့က IKEA ကိုသွားလည်ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လလောက်က ဘလော့တစ်ခုမှာ IKEA အကြောင်း ဖတ်ပြီးကတည်းက သွားချင်လို့ ၁ ခေါက်သွားခဲ့ပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက်လောက်တော့ မုန့်တွေမစားဖြစ်ဘူး။ မနေ့ ကတော့ တော်တော်စားဖြစ်တယ်။ အပေါ်ကပုံတွေထဲမှာ ပက်စ်စတာ တစ်ခုဘဲကိုယ်စားတာဆိုပေမယ့် သူများ စားတဲ့ပုံတွေလည်း ရိုက်လာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီထဲက ကြက်ကြော်က တော်တော်စားကောင်းတယ်။ မြန်မာပြည်တုန်း က ပုဂံသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ လက်ပပြားကြက်ကြော်အရသာကိုမှီတယ်။ အဲ့ဒီလက်ပပြားကြက်ကြော်ကိုမှီတာ ဒီတစ်ခုဘဲရှိတယ်။ လက်ပပြားကြက်ကြော်မစားဖူးတဲ့လူတွေ အဲ့ဒီမှာသွားစားရင် ပုဂံက လက်ပပြားကြက်ကြော် က ဒီအတိုင်းပါလားလို့ ခန့်မှန်းလို့ရမှာပါ။ မုန့်စားပြီး ဘာမှထွေတွေထူးထူးမ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ မျက်နှာသုတ် ပုဝါနဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးတွေ ၀ယ်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။ IKEA ကိုသွားပြီးရင်တော့ ပိုက်ဆံတွေအများကြီးလိုချင်တဲ့ စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ သူ့မှာဆင်ထားတာတွေ တော်တော်လှပြီး ဈေးကြီးလို့ ပိုက်ဆံတွေအများကြီး လိုချင်မိတယ်။
Labels: ခရီးသွားမှတ်တမ်း, အစားအသောက်
အခုတလော နားထောင်ဖြစ်တဲ့သီချင်းလေးတွေပါ။ ဒီသီချင်းကို ကြားဖူးတာကြာပေမယ့် စာသားကို သေချာသိတာ သိပ်ပြီးမကြာသေးပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက
ဒီသီချင်းလေးကိုကြိုက်တာ ၂၀၀၀ လောက်ကတည်းက အရင်တုန်းက တိပ်ခွေနဲ့ရှိပြီးအခုမှ အမ်ပီ၃ရလိုက်လို့ တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေတယ်။
Australian Opean And Something About Rafael Nadal
Posted by Red's Rose Dream at 11:35
Nadal ကတော့ အခုလောလောဆယ် တင်းနစ်မှာ ကမ္ဘာ့ နံပါတ်တစ်ပေါ့။ သူတစ်ဖြစ်လာတာလည်း တော်တော် ခက်ခက်ခဲခဲပဲ။ သူကအမြဲတမ်းကြိုးစားရတယ်၊ ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုလည်း ဘယ်တော့မှသက်သာ တဲ့ အပိုင်းမှာမရှိဘူး။ Nadal က ပြိုင်ပွဲတိုင်းကို ခွန်နဲ့အားနဲ့၊ ကြိုးစားပမ်းစားပြိုင်သလို သူနဲ့ပြိုင်တဲ့လူတွေကလည်း သူ့လိုဘဲ အားကြိုးမန်တက်စကားတဲ့လူတွေများတယ်။ Roger နဲ့တွေ့တဲ့လူတွေကတော့ များသောအားဖြင့် အေးအေး ဆေးဆေး သမားတွေများပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း Roger အတွက်ကံကောင်းပြီး။ Nadal အတွက် နဲနဲခက်ခဲ နေတာလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ Roger နဲ့ကွာတာကတော့ သူက ငယ်လို့ပဲလား၊ ပင်ကိုယ်စိတ်ပဲ လောကြီးလို့ လားတော့မသိဘူး။ နဲနဲလေး Aggressive ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု နောက်ပိုင်း နံပါတ်တစ်ဖြစ်ပြီးမှ တော့ အရင်လို သိပ်ပြီး မဖြစ်တော့ဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်။
Nadal ကိုအရင်က သိပ်ပြီးကြည့်မရခဲ့ဘူး။ Roger Fun က Nadal ကိုကြည့်မရတာ ဆန်းတော့လည်း မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၇ Winbledon, Final ပြိုင်ပွဲမှာ Roger ကိုနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ သူ့ခြေထောက်ဒဏ်ရာကြီးကို လုံးဝဂရုမစိုက်ဘဲ အသေအလည်းရိုက်နေတာကိုကြည့်ပြီး တော်တော်သနားသွားမိတယ်။ Roger က တခြားလူတွေကိုသာ နည်းနည်းလောက်လျှော့ပေးပြီး ညှာတဲ့ပုံပေါက်ပေမယ့် Nadal ဆိုရင်တော့ ဘယ်တော့မှ အလျှော့ပေးတဲ့ပုံမရှိဘူး။ နဲနဲလေး ညှင်းပြီး ဆော့တယ်လို့မြင်မိပါတယ်။ အဲ့ဒီပွဲတုန်းကဆို Roger အနေနဲ့ နိုင်အောင်ရိုက်ရင်နိုင်သွားနိုင်ပေမယ့် ဟိုဘက်က ဒဏ်ရာကြီးနဲ့ကို အချိန်တော်တော် ဆွဲပြီး ရိုက်နေတာ မပြီးတော့ဘူး။ ဟိုကလည်းအနားမယူဘဲ ပွဲပြီးတဲ့အထိ ဇွဲကြီးကြီးနဲ့ ရိုက်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီပွဲက စပြီး Nadal ကို နဲနဲကြည့်ရသွားတယ်။ အစကတော့ ကွင်းထဲကိုဝင်လာတာနဲ့ စောင့်ကြွားကြွား နိုင်လို့ တော်တော့်ကို ကြည့်လို့ကိုမရခဲ့ဘူး။ Winbledon ပွဲတုန်းကတော့ မျက်နှာလေးက သနားစရာလေး တော်တော့်ကိုနာနေ တာကိုသည်းခံပြီး အရှုံးမပေးဘဲရိုက်နေတာ။ အဲ့ဒီစိတ်ဓါတ်လေးကို သဘောကျ သွားတာ လည်း ပါမှာပါ။
2007 Winbledon မှာ ဒဏ်ရာတွေ ဗလဗွနဲ့ဖြစ်နေတာကို မနားဘဲ ၂၀၀၇ မှာဘဲ တခြားပွဲကို ဆက်ရိုက်ခဲ့တယ်။ ဒီလောက်တောင် ပိုက်ဆံရှာနေရလားဆိုပြီး ဒေါသထွက်မိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ပွဲတွေဆက်ရိုက်တာဟာ သူ့ကို နံပါတ်တစ်ဖြစ်အောင် တွန်းပို့ခဲ့တယ်လို့ နောက်ကျမှမြင်မိပါတယ်။ အရင်ကနဲနဲ Aggressive ဖြစ်တက်တဲ့ Nadal အခုတော့ နဲနဲလေး ရင့်ကျတ်လာပြီလို့ မြင်မိပါတယ်။ အရမ်းဖိကစားလို့ ဒဏ်ရာရပြီး ပွဲဆက်မစားနိုင်ရင်သာ ကိုယ့်အိမ်မက်ကြီးကို စွန့်လွှတ်လိုက် ရမှာကို နဲနဲသဘောပေါက် သွားပြီလို့ မြင်မိပါတယ်။ Roger ကို ပိုကြိုက်တဲ့အချက်ကတော့ သူကပွဲကို ဥာဏ်လေးသုံးပြီး ကစားတာ များလို့ပါ။ အမှတ် ၁ မှတ်အတွက် သူ့ကိုယ်သူ ဒဏ်ရာအရမခံဘူး။ လွတ်ပေးလိုက်တာများပါတယ်။ Nadal ကတော့ ပွဲတိုင်းမှာ တစ်မှတ်မှ လွယ်လွယ်လွှတ်မပေးတော့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ ထူးဆန်းတာက ဒီလောက် ဒူးဒဏ်ရာတွေနဲ့တောင် နံပါတ်တစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ Nadal ကဘဲ တော်တော်ကြံ့ခိုင် လို့လား တခြားလှို့ဝှက်ချက်တွေ ရှိနေလို့လားဆိုတာကတော့ စဉ်းစားစရာပါဘဲ။
အရင် Nadal က အကျီင်္လက်ပြတ်ဝတ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်နေကျကို အခု Auzi Openမှာ အကျီင်္လက်နဲ့ဖြစ်နေတာ နဲနဲတော့ ထူးဆန်းမိပါတယ်။ သူရဲ့လှပတဲ့ လက်မောင်ကို ပြင်သစ်က ဆယ်ကျော်သက်တွေအသည်းစွဲလို့ လည်းဖတ်ဖူးပါတယ်။ ကွင်းထဲကိုကြည့်လိုက်လို့ လက်ပြတ်နဲ့ဆို Nadal ဆိုတာသေချာလောက်အောင်ကို အကျီလက်ပြတ်က သူ့ရဲ့သင်္ကေတလိုဖြစ်နေရာကနေ ဘာလို့ လက်ပါတဲ့အကျီတွေပြောင်းဝတ်လဲလို့ စိတ်ဝင်စားမိတယ်။ အခုအချိန်အထိ အဲ့ဒီကိစ္စ အစအနရှာမရသေးပါဘူး။ မနေ့က Auzi Quarter ပွဲမှာ Nadal နဲ့ရိုက်တဲ့ Simon ဆိုတာက နောက်ဆုံးပွဲပြီးတဲ့အထိ သေသေချာချာကို ရိုက်သွားတာ။ နောက်ဆုံးတစ်ချက် ကိုတောင် Challenge ခေါ်ပြီးကြည့်သွားသေးတယ်။ Nadal ကတော့ အမြဲ အားကြိုးမန်တက်ကစားလို့ ပွဲတိုင်း နီးပါး ဒဏ်ရာရတာတွေ့ပါတယ်။ မနေ့ကတောင် တစ်ပွဲပြီးတိုင်း ရေခဲအိပ်ကြီး ဂုတ်ပေါ်တင်တင် ထားတာတွေ့မိတယ်။ ဒူးမှာလည်း ပလာစတာနဲ့။
တစ်ယောက်တည်းကစားတဲ့ အားကစားတွေထဲမှာ တင်းနစ်ဟာ အပင်ပန်းဆုံးနဲ့အမောဆုံး အားကစားလို့ ဖေဖေပြောတာ ကြားဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပွဲကို ၂ နာရီကျော်ကျော် အားကြိုးမာန်တက်ကစားဖို့ဆိုတာ တော်ရုံ စိတ်ဓါတ်၊ ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်ရုံနဲ့ မလွယ်တဲ့ကိစ္စလို့လည်း ပြောပါတယ်။Roger ကတော့ အမြဲတမ်း ၃ နာရီကျော်လောက် ကစားတယ်။ သူကတော့ အမောခံနိုင်တာ စံချိန်ချိုးတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တင်းနစ်သမားဖြစ်နေတာကို။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနှစ် Auzi Open ကို ဘယ်သူ နိုင်မလဲကြည့်ရဦးမှာပါ။ < အခုလောလောဆယ်တော့ Roger ရော Nadal ရော Semi Final တက်သွားကြပါပြီ။
မနှစ်က Champion ရသွားတဲ့ DJokovic ကတော့ Quarter မှာဘဲ နေမကောင်းလို့ ကစားနေရင်ကနေ အနားယူသွား ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီနှစ် Defending Champion မရှိဖြစ်နေပါတယ်။ Roger နဲ့ Nadal နှစ်ယောက်ထဲကတော့ တစ်ယောက် ယောက်တော့ ရမှာ သေချာသလောက် ရှိနေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Roger နဲ့ပြိုင်မယ့်သူက US က Roddick ဖြစ်နေတာမို့ပါ။ Roddick ကို Roger နိုင်ဖို့က ၈၀ ရာနှုန်းလောက် သေချာနေတာမို့ Fianl မှာ Nadal နဲ့ တွေ့ဖို့လည်း သေချာနေပါတယ်။ Nadal ဘက်ကလည်း သူ့နံပါတ်တစ် ကြီးကိုအကျခံပြီး အရှုံးပေးမှာ မဟုတ်လို့ဆိုတာကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ Nadal အတွက် နံပါတ်တစ်ဖြစ်ပြီးမှ ဒီ Auzi Open မှာ Champian ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ Nadal အတွက်တော့ ပျော်စရာကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် Roger ချိုးထားတဲ့ စံချိန်ကို မှီဖို့ တော့ တော်တော့်ကို ကြိုးစားရပါဦးမယ်။ ကံကောင်းပါစေ Nadal ရေ။
Nadal ရဲ့ တခြားပုံလေးတွေ့လို့ တင်လိုက်ပါတယ်။ Nadal က ဘယ်သန်မို့လို့ ဘယ်လက်မောင်းက ညာလက် ထက်ကို နဲနဲလေးပိုကြီးနေပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဘယ်သန်တွေကို နိုင်ဖို့လည်းခက်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒီပုံမှာတော့.... သူရဲ့ နာမည်ကြီး ဘယ်လက်မောင်းကြီးကို ကြွားထားတာမို့ အမှတ်တရ အနေနဲ့ ဒီထဲမှာ သိမ်းထား လိုက်တဲ့သဘောပါ။
Posted by Red's Rose Dream at 14:08
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း နှစ်ရဲ့ ပထမလမှာကျင်းပတဲ့ ၂၀၀၉ Australia Open တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲတွေ စနေပါပြီ။ ကျွန်မရဲ့ တင်းနစ်သူရဲကောင်းကြီး Federer ကတော့ မနှစ်က ပြုတ်သွားတဲ့ နံပါတ်ကို ပြန်တပ်ဖို့ တော်တော် ကြိုးစားခဲ့ပုံရပါတယ်။ ၂၀၀၇ တုန်းက ရွဲနေတဲ့ ဗိုက်ကြီးပြုတ် သွားပြီး လူလည်း တော်တော်ပိန်သွားပါတယ်။ မနှစ်က Auzi Open ကို ၃ နှစ်ဆက်တိုက်နိုင်လာတဲ့ Federer မနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကို ၅ နှစ်ဆက်တိုက်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်မက မှန်းထားပေမယ့်၂၀၀၈ Auzi Open ကို Federer မရခဲ့တာ တော်တော်စိတ် မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ဖိုင်နယ်ထိ တက်လာပြီးမှ နောက်မှတက်လာတဲ့ အငယ်လေးရဲ့ ရိုက်ချက်ကို မခံနိုင်လို့ ရှုံးရတာဟာ Federder အတွက်တော့ တစ်နှစ်တာလုံးကံ မကောင်းစေခဲ့ပါဘူး။ သူအရမ်းလိုချင်ပြီး အမြဲ မရခဲ့တဲ့ French Open (Rolland Garros) ကိုလည်း သူ့ပြိုင်ဘက်ဟောင်း Nadal ကိုရှုံးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ငါးနှစ်ဆက်တိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ Wimbledon မှာတောင် ရှုံးခဲ့လို့ ကမ္ဘာနံပါတ် တစ် ခုံနေရာကို Nadal အတွက် ဖယ်ပေးခဲ့ရတာပါ။
Federer က ကစားပွဲတိုင်းမှာ စိတ်ရှည်ပြီး အထိအခိုက်အနည်းဆုံးကစားနိုင်တဲ့ ကစားသမားပါ။ ပြိုင်ပွဲတွေတလျှောက် စိတ်ရှည်သလို၊ ပြိုင်ဘက် ကစားသမားကိုလည်း အရမ်းညှာတာပါတယ်။ ကျွန်မအမြင် သူ ဒုတိယနေရာကို ရောက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ သူရဲ့ ညှာတာတက်တဲ့စိတ်ကြောင့်လို့ မြင်ပါတယ်။ သူက သူ့ပြိုင်ဘက် ကို လုံးဝအပြတ်အသတ်နိုင်ပြီး ကစားတဲ့ပုံစံမျိုး ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူး။ ပြိုင်ဘက်စ်ိတ်လှုပ်ရှားနေရင် အမြဲတွဲခေါ်ပြီး အနိုင်ပေး တဲ့အလေ့အကျင့်အမြဲရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအချက်ကို Federer ကပျော့ညံ့လာတယ် လို့ ဝေဖန်သူတွေက ဆိုကြပါတယ်။နောက်တစ်ချက်က သူ့ရဲ့ အကွတ်တွေကို တခြား ကစားသမားတွေ က သူ့ပြိုင်ပွဲတွေ၊ ဗွီဒီယိုတွေ ပြန်ကြည့်ပြီး သိနိုင်တယ်လို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါ ကြောင့် အခုနောက်ပိုင်းမှာ သူ့ပြိုင်ဘက် တ်ာတော် များများဟာ သူ့ရဲ့ရိုက်ချက်တွေကို သေချာ ပြင်ဆင်ထားပြီး တဲ့ပုံစံနဲ့ ခုခံတာမျိုးကို ပွဲတိုင်းနီးပါတွေ့ရပါတယ်။
နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ သူကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ်ဖြစ်ကတည်းက အနားယူသွားတဲ့ ချန်ပီယံဟောင်း Psete Sampra နဲ့ ၂၀၀၇ မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ချစ်ကြည်ရေးပွဲရိုက်ပြီး Federer ရှုံးသွားချိန်မှာ သူရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ နဲနဲလျှော့ပါးသွားတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ၂၀၀၈ မှာ သူ့အတွက်ကံမကောင်းစေခဲ့တဲ့အချက်တွေပဲ ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာတင်းနစ်ရာဇ၀င်မှာ Wimbledon လိုပွဲမျိုးကို ၅ နှစ်ဆက်တိုက်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ လူ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၂ ဦးဘဲရှိ တဲ့အထဲမှာ Federer ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Federer ဟာ ၂၀၀၇ Wimbledon Championship ပြိုင်ပွဲမှာရဲ့ ၅ နှစ် ဆက်တိုက်အနိုင်ရသူတွေကိုသာ ပေးတဲ့ ရွှေတံဆိပ်ကိုရခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ၂၀၀၈ မှာ သူအတွက် အကောင်း ဆုံးကတော့ US Open ကို ၅ နှစ်ဆက်တိုက်ထပ်ရလိုက်တာဟာ ၂၀၀၈ အတွက် အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ သူသာ 2008 မှာ Australia Open နဲ့ Wimbledon ကို သာနိုင်ခဲ့ရင် သူဟာ ကမ္ဘာမှာ ၂၀၀၈အထိ Grand Slam တွ အများဆုံးပိုင်တဲ့ တင်းနစ် သမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု ၂၀၀၉ Australia Open မှာ နိုင်မှ သူက အရင် စံချိန်ချိုးထားတဲ့ Pete Sampras ကို ကျော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Federer ၂၀၀၉ Australia Open မှာနိုင်ပါစေလို့လည်း ဆုတောင်း မိပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း ဆုတွေလည်းထပ်ပြီး ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး မိပါတယ်။